Intengiso enkulu: Jonga ngaphaya koThengiso | Martech Zone
Intengiso enkulu: Jonga ngaphaya koThengiso
NgoLwesine, uJanuwari 3, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Inxalenye enkulu yentengiso kukukwazi ukuba nomsinga ongapheliyo womxholo wokuxhasa abantu bakho, imveliso okanye inkonzo. Kwilizwe lezoshishino, izinto ziyatshintsha yonke imihla - sifumana ishishini elitsha, siphuhlisa iimveliso ezintsha, sinikezela ngeenkonzo ezintsha kwaye sifumana abathengi abatsha. Isiganeko ngasinye sibonelela ngokutya okukhulu kumxholo omtsha!
Ngapha koko, ekuphela kwendlela yokuphela komxholo omkhulu kwiwebhusayithi yequmrhu kukuphelelwa ngabantu, iimveliso, iinkonzo okanye abathengi. Oko unako yenzeke kwaye mhlawumbi luphawu olulungileyo lokuba ibhlog okanye enye indlela yokuthengisa ayisiyiyo apho kufuneka ujolise khona!
UChris undincomile namhlanje ukuba ndiyakwazi ukwenza umxholo onjengamanzi. Akusoloko kulula kodwa nantsi indlela endenza ngayo ...
Uyicofa njani iMixholo emininzi
Isizathu sokuba ndingaphelelwa ngumxholo kukuba ibhlog yam ibandakanya bubanzi swath yezihloko. Ndingathetha ukuqinisekiswa kwefom Ngenye imini, a incwadi enesithukuthezi mna ngokulandelayo, njani Bala umgama nge-PHP kunye ne-MySQL kunye a I-WordPress tweak ngenye imini.
Zonke ezi zikwindawo yeTekhnoloji yeNtengiso. Ukuqinisekiswa kweFom kukuphela kokuphela, okanye okubonakalayo, inxalenye yesicelo sesoftware okanye iwebhusayithi. Ukuba awukwazi ukwenza iifom ekulula ukuzisebenzisa kwaye unganikeli ngqalelo kumava omsebenzisi, ichaphazela ukuthembeka kwakho kwisithuba… kwaye ngenxa yoko, kuchaphazela ukuthengisa kwakho - ukoyisa umbono okanye ukudlulela ngaphaya kwawo.
Incwadi enamagama? Ewe, yincwadi yokuba zingaphi iinkampani ezikhula ngokucacileyo ngaphandle kwedatha exhasayo ethi kufanelekile. Inkqubo ye- Black Swan. Kubalulekile kubathengisi, akunjalo? Kufanelekile ukuba kube njalo!
Ukubala umgama? Bavela phi abathengi bakho? Ukuba ungumthengisi, uyazi ngokuthe ngqo apho abathengi bakho bavela khona ke kungcono ufunde ukuba ungaziqonda phi iindwendwe zakho zewebhu.
Kwaye i-WordPress tweaking? Ewe, iposi ijongana nokugcina abathengi kwiwebhusayithi yakho ngokubonelela ngomxholo onxulumene noko kunye nokubonelela ngeendlela zokwenza ukukhangela kwiinjini yokukhangela zokufumana ezintsha.
Ukuthengisa ayisiyo nje iiBlogs, iiNcwadi kunye neeNkomfa
Ukuba uyazibuza ukuba ngubani iSebe lakho lokuThengisa kule mihla, kuya kufuneka ujonge ngaphaya kwetshathi yombutho. Wonke umntu okwinkampani yakho ukusuka kuMthengisi wakho ukuya kuMmeli weNkonzo yaBathengi unokuba nefuthe kwintengiso yakho ngakumbi kunalawo madoda akha iincwadana zeendaba. Lixesha lokuba, njengoMarketer, uqale ukunikela ingqalelo!
Awundikholelwa? Yenza i Uphendlo lukaGoogle lwe "Huntington Bank Sucks". Indibaniselwano yewebhusayithi ehlwempuzekileyo, inkxaso eyoyikekayo kunye nabasebenzi abanomkhenkce ekusebenzeni kakuhle benze iiNjini zokuKhangela eziphezulu! Kwenzeka njani ukuba intengiso enkulu?
Ibhlog ayigxilanga ekuThengiseni
Kukho uluhlu lweeBlogi zeNtengiso eziphezulu ezinokulandela okulandelayo kumnatha. Ndiyaluthanda uluhlu kwaye ndlujonga rhoqo ngenyanga. Nyanga nganye, ibhlog yam ayikho kuyo. Rhoqo ngenyanga ndibuza ukuba kutheni. Ndifumene impendulo yam kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo… ndishwankathela: ibhlog yam ayijolisanga kuNtengiso.
Ngelixa ndixabisa ukuba kukho imida engqongqo kwinto le Ukuthengisa ibhlog kuchaziwe njenge, ndiyavuya kuba ndingakhange ndenze uluhlu! Ukuba uyiMarketer kwaye ekuphela kwezinto ozihoyileyo nakuwo nawuphi na umsebenzi ongena uphuma kwisebe lakho, iibhlog zokuthengisa, iincwadi neenkomfa. Uya kuyidinga.
Ukukwam? Andizukuphelelwa ngumxholo naliphi na ixesha kungekudala!
tags: Ukuvezwa kwegamaIziphumo zeshishinicmounxibelelwano lwabathengiUtshintsho kuGoogleamanqaku ekloutleyaIsikhokelo sentlaloubume bezentlaloUkungena ngemvume kuluntuukwabelana ngoluntuzendlelaWordPress
Unokuba Nengxaki yeWebhu ye-2.0 Xa…
Nantsi indlela othi enkosi ngaphandle kwelizwi!
Jan 6, 2008 ngo-5: 24 PM
Ngokuphathelele "… ngokucofa umxholo omninzi", ndifumene indlela kubanini bewebhusayithi yokufumana umxholo ongezelelweyo ngokusebenzisa imisebenzi yokukhangela yeGoogle… ikuvumela ukuba ujolise kukhangelo lwakho "simahla ukusebenzisa, ukuthengisa, okanye ukuguqula" umxholo ... Ingcebiso nje.